SG Madagasikara: tetikasa « ombona » miaraka amin’ny Care | NewsMada
SG Madagasikara: tetikasa « ombona » miaraka amin’ny Care
Hitondra fampandrosoana eny ifotony, any amin’ny distrika Vatomandry, ny tetikasa “Ombona” iarahan’ny banky Société génerale (SG) Madagasikara amin’ny fikambanana Care International Madagasikara manatontosa. Miara-miombon’antoka amin’izy ireo ny Telma sy ny Vondron’olona an-toerana miaramanao tahiry sy mifampindrambola (Voamami) any an-toerana. Nampahafantarina, ny zoma 10 mey teo tany Ilaka-Atsinanana any Vatomandry, ity fiaraha-miasa “Ombona” ity.
Fitahirizam-bola tsotra nangonin’ny vovonana Voamami ary apetraka any amin’ny banky SG Madagasikara ny “Ombona”. Nisantatra azy ny fikambanana dimy ao anatin’ny Voamami ary hanaraka azy ireo koa ny fikambanana 20 hafa amin’ity taona 2019 ity.
Notsorin’ny tale misahana an’i Madagasikara ao amin’ny Care, Rajaonarison Andriamiarinarivo, fa manaporofo ny otrikarena ateraky ny fiaraha-miombon’antoky ny sehatra tsy miankina, ny fanjakana ary ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana ONG ho an’ny mponina eny ifotony izao fiaraha-miasa izao.
Ampisaina ny MVola
Fomba azo antoka hitahirizan’ny Voamami ny volany ny hametrahany azy any amin’ny banky, ny Ombona. Ampiasaina amin’izany ny teknolojia vaovao, toy ny fahafahana mamindra ny vola amin’ny alalan’ny MVola Telma, ka tsy mila mankany Mahanoro misy ny masoivoho SG Madagasikara intsony ny mpikambana.
Nilaza ny tale lefitry ny SG Madagasikara, i Fréderic Leiritz, fa dingana voalohany ihany izao ka angatahina ny tompon’andraiki-panjakana hanohana ny fampanaraham-penitra ny satan’ny Voamami, ahafahany manitatra ny seha-pihariany.